Xog: Labo Cabdi Weli oo shir qarsoodi ah ku leh Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xog: Labo Cabdi Weli oo shir qarsoodi ah ku leh Itoobiya
25th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonyahay, waxaa shalay oo axad ah magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya kulamo qarsoodi ah uga bilowdeen R/wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed Maxamed iyo madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Kulanka ayaa kusoo beegmay xilli uu weli xunyahay xiriirka u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, kaasoo xiriirka u jaray DF markii muqdisho lagu saxiixay heshiis maamul loogu dhisayo gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Sida ay sheegayaan ilo madax banana, labada Cabdi Weli ayaa ka wada hadlaya xiriirka xumaaday ee dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland.
Sidoo kale, labadan nin ayaa ka wada hadlaya arrimo la xiriira sahminta shidaalka iyo gaaska dabiiciga, kuwaasoo ka mid ah waxyaabaha muranku ka jiro dhulka Soomaaliya oo dhan.
Wadahadalka dhexmaraya labada Cabdi Weli ayaa la sheegay inuu yahay mid toos ah oo iyaga ku kooban, islamarkaana aysan dhexdhexaadineyn dowladda Itoobiya ama IGAD toona.
31-kii July ayaa madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Federaalka, wuxuuna u teertay xildhibaanada kazoo jeeda Puntland.
20-kii bishaan August ayaa waxaa shir socday labo maalmood oo dhexmay Gaas iyo qaar ka mid ah xildhibaanda Federaalka ee kazoo jeeda Puntland Garowe kazoo saareen war-murtiyeed ay ku sheegeen in mudo 30 beri ah loo qabanayo wada hadal lala galo dowlada Federaalka si wax looga qabto sida hadalka lo dhigay khaladaadka uu maamulka Puntland tabanayo.
Wafdi ka soda xukuumada Soomaaliya iyo IGAD oo la filayo iney tagaan Kismaayo
Iraq After Maliki Maliki